PressReader - Isolezwe: 2018-04-17 - Sekwanele manje, abahlukane noMsholozi
Sekwanele manje, abahlukane noMsholozi
MHLELI: Sekuyinsakavukela e-Afrika nasemhlabeni jikelele ukuthi uma ungumengameli ophethe izwe ngenqubo engahambelani namazwe aseNtshonalananga uphile ngokuhlaselwa njalo nje. Loyo mengameli uyaye avulelwe amacala abhedayo, izwe lakhe linswinywe ngakwezohwebo, umbuso wakhe uketulwe, kwesinye isikhathi agcine ngako ukuyiswa kwagoqanyawo.
Lokhu kuyisihluku esenziwa amazwe aseNtshonalanga esebenzisa izicashalala zawo ezitshalwe amazwe ngamazwe ukuthi yonke indlela yokubusa emhlabeni kube yilena ehambelana nawo. Sikubonile lokhu kwenzeka kubaholi MHLELI: Ngicabanga ukuthi abasebenzi bakahulumeni bazosebenza manje inqobo nje uma kusenezinkundla zokuxhumana.
Lokhu ngikusho ngoba uma isigameko esithile noma umsebenzi othile kahulumeni evela kwezokuxhumana bayaye batatazele abaholi bethu. Bheka nje i-video yomsebenzi kahulumeni woMnyango wezaseKhaya ebigcwele ezinkundleni zokuxhumana sabona oGigaba betatazela bethi bazophenya ukuthi ukuyiphi indawo umnyango onomsebenzi owayenake ucingo lwakhe abanjengoFidel Castro, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Hugo Chavez, Lula da Silva nabanye. Ukuze ube wumengameli ophethe izwe kahle kufanele uhlale uhambisana nezinqumo zamazwe aseNtshonalanga.
OkaNxamalala uyinyathele emsileni ngokuthi athathe izwe alifake ngaphansi kwenhlanganyela yamazwe eBRICS okuyi Brazil, Russia, India, China (South Africa) okumdalele amazinyo abushelelezi kakhulu kulabo ngxiwankulu baseNtshonalanga okugcine ezithola ehlaseleka kusetshenziswa abezindaba namaqembu aphikisayo ePhalamende.
Amazwe aseNtshonalanga ayibona iBRICS izowaphazamisa ekulawuleni amazwekazi omhlaba. Yingakho wonke amazwe angaphansi kweBRICS ethola ukuhlaseleka. Kwasekuqaleni ekungeneni esihlalweni uMsholozi wayengathandwa yimindeni yamabhunu ayizigwili aphethe umnotho eNingizimu Afrika. La mabhunu azibona ehluleka ukusondela alawule uMsholozi njengoba kade kwenzeka kumengameli abanjengo Madiba noMbeki phambilini.
Enye into edalele uMsholozi isigcwagcwa wukuthi alibeke ngesihloko ukuthi umhlaba kufanele ubuyiswe kubantu abamnyama ngaphandle kwenkokhelo. Ube ngumengameli wokuqala kaKhongolose ukumela iqiniso ngokuphucwa kwabantu abamnyama umhlaba, okugcine ngokuthi ingqungquthela ebingonyaka ophelile igcine ivumela yena.
Ukuvusa amacala amadala ango-2003 kungenye yezindlela zokuzama ukubukela phansi amagalelo amahle awenzile esesesihlalweni sobumengameli. La macala asephenduke eminye nje yemidlalo enonya yezepolitiki okuhlaselwa ngayo ubaba uZuma. Umshushisi weNPA ngo-2003, uBulelani Ngcuka, wakubeka kwacaca ukuthi ukushushisa uMsholozi kwakuwukumosha isikhathi ngoba amacala ayengenaso isisindo sokuphumelela enkantolo ngakho awahoxiswe.
Ukuwina ukhetho lobumengameli kaKhongolose kukaMsholozi ngo-2007 ehlula uMbeki ePolokwane kwamdalela inkinga ngoba lamacala avuswa. Okwagcina ngokuthi umshushisi owayephethe iNPA ngaleso sikhathi, uMokotedi Mpshe, naye awahoxise futhi esephethe nobufakazi obuqoshwe kuma tapes obushoyo ukuthi kunesandla sesinxele esasibophela uMsholozi amanqina enyathi.
Kuzomele sisukume siyindlu emnyama sisho ukuthi sekwanele manje, abahlukane noMsholozi. Lwazi Ntombela WE-BLACK FIRST LAND FIRST (BLF) – KZN